बाल्टिमोरबाट गायिका सरिश्मा अमात्यले निकालिन ढुकढुक गर्ने नामक बोलको गीत - Namasteholland, News, Information and Technology
८ बैशाख २०७७, सोमबार १२:४४0263
विजय थापा,डिसी। अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यको बाल्टिमोरमै बस्दै आएकी लोकप्रिय गायिका सरिश्मा अमात्यले घर भित्र बसेर ढुक ढुक गर्ने नामक बोलको गीत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
कोरोना भाइरसबाट सबै भन्दा संक्रमित राष्ट्र अमेरिका भएको अवस्थामा मेरिल्याण्ड राज्यमा घरमै बस्ने कार्यकारी आदेश भएकोले उनले लक-डाउन(हिडडुल बन्देज)जस्तै भएको अवस्थामा कलाकार भएको नाताले गीत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
बिगत ३० दिन देखि घरभित्र नै सीमित भएको अवस्थामा उनले केही गरौ भनेर मेरिल्याण्ड राज्यमै उनको आफ्नो घर भित्रै छायाँकन गरि गीत युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
गायिका अमात्य एक व्यवसायी पनि हुन् भने उनका पति चर्चित गायक संजिप प्रधान हुन् । दुवै दम्पत्ति बेलाबेलामा समुदायका कार्यक्रममा अमेरिका बाहिर र अन्य समुदायका सांगीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आई रहेका छन् ।
गायिका अमात्यले मधुरीमा-२ वाट ढुक ढुक गर्ने गीतलाई नयाँ रुपमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । उक्त गीतलाई सङ्गीत अनिल शाहीले दिएका छन् भने शब्द जनक दीपको रहेको छ ।
भिडियो (श्रब्य दृश्य )हेर्न यहाँ थिच्नु होस् :
वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन !
४ असार २०७५, सोमबार २०:०३0407
१० चैत्र २०७६, सोमबार २२:५७0350
१० मंसिर २०७६, मंगलवार १२:४५0385